आज शुक्रबारको दिन महालक्ष्मीको कृपा पाउन अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Religious/आज शुक्रबारको दिन महालक्ष्मीको कृपा पाउन अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय !
हुन त हप्ताका सबै दिनहरू भगवानको पूजा गर्नका लागि शुभ मानिन्छ तर शुक्रबार देवी लक्ष्मीको पूजाका लागि निकै शुभ मानिन्छ । भक्तहरूको साँचो भक्तिले लक्ष्मी प्रशन्न रहन्छिन् र उनको कृपा भक्तहरुमा सधैँ रही रहन्छ। धनकि देवी लक्ष्मीलाई खुशी पार्दा धेरै समस्याहरूबाट मुक्त पाउँन सकिन्छ ।
लक्ष्मीलाई साँचो हृदयले सम्झेर कुमकुम, अक्षता,फूलहरू महलक्ष्मीको मूर्ति वा चित्रमा बिहान र साँझ धूप चढाएर, विश्वास र पवित्र आत्माको साथ अर्पण गर्नुपर्छ। र यस कुराको पनि विशेष ध्यान राख्नुपर्दछ कि कुनै पनि अवस्थामा धन लक्ष्मीका उपासकले महिलाको अनादर गर्नु हुँदैन।